Ny Xiaomi Mi 9 dia ho avy amin'ny fakan-tsary vaovao | Androidsis
Fanatsarana, fanalefahana ary maro hafa no fiasa fakan-tsary vaovao hoentin'ny Xiaomi Mi 9
Xiaomi dia nanambara tamin'ny herinandro lasa teo fa ny sambo Mi 9 dia hanomboka amin'ny 20 Febroary. Mahaliana fa ity ilay daty mitovy Samsung dia efa nanomana ny hanambara ny Galaxy S10 andiany.
Xiaomi dia misarika ny sain'ny ankamaroan'ny sain'ny antsipiriany ofisialy izay navoakany nandritra ny andro maromaro. Mba hanamafisana fa ny Mi 9 ho hita manerantany, Xiaomi dia nandefa ny antsipiriany tao amin'ny Weibo sy tao amin'ny pejy Twitter ofisialiny. Mbola mipoitra hatrany ny antsipiriany, toy ireo endrika vaovao na fahaiza-manao hatsarana ao amin'ny Mi 9 fa ny filoha sy mpiara-manorina an'i Xiaomi, Lin Bin, dia nanambara.
Araka ny pitsopitsony, Xiaomi dia nanampy algorithm vaovao amin'ny asan'ny hatsaran-tarehy amin'ny Mi 9. Ity algorithm ity dia hitondra endrika fanatsarana endrika vaovao, toy ny fahitana taona, ny fahaizana mamantatra ny zazakely ary manamboatra ny hatsaran'ny hazavan'ny zazakely mba hitovy amin'ny an'ny zazakely ny hoditra rehefa maka sary miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary koa, ny fiasan'ny hatsaran-tarehy Mi 9 dia hotanterahina amin'ny lahy sy ny vavy samy hafa. Ka ny lehilahy sy ny vehivavy dia afaka maka sary miaraka nefa tsy misy fety miharihary.
Lin Bin koa dia nanambara fa ny Mi 9 dia ho avy miaraka a asa fampihenan-tena marani-tsaina natao ho an'ny zazavavy. Ankehitriny ny tovovavy dia afaka manatsara ny sariny hampiavaka ny "sary 8" na dia tsy manana izany aza izy ireo. Ny endri-javatra dia mampiditra fiakarana amin'ny tarehy maranitra, andilana, fampitomboana ny tratra, fiakarana valahana, fatana, fanintonana zanak'omby, ary endrika sy fihetsika samy hafa arakaraka ny karazany sy ny endriny.
Hatraiza ny fahombiazan'ireto fiasa ireto? Tsy fantatsika. Amin'izao fotoana izao, tsy afaka miandry ny hanaitra azy ireo fotsiny isika, satria miresaka momba ny telefaona misy tombony be indrindra avy amin'ny orinasa sinoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fanatsarana, fanalefahana ary maro hafa no fiasa fakan-tsary vaovao hoentin'ny Xiaomi Mi 9
Ireo telefaona andiany Galaxy A vaovao an'ny Samsung dia ho tonga manomboka ny volana martsa
ZTE ny finday avo lenta 5G an'ny ZTE hanombohana amin'ny 25 Febroary: io no Axon 10 Pro